FITSABOANA NY HOMAMIADANA : Notokanana ny « Centre de Radiothérapie au Cobalt » ho an’ny CHUJRA – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 3:08
Hanatsara ny fandraisana an-tanana ireo marary ny fitaovana vaovao.
Accueil/Samihafa/FITSABOANA NY HOMAMIADANA : Notokanana ny « Centre de Radiothérapie au Cobalt » ho an’ny CHUJRA
FITSABOANA NY HOMAMIADANA : Notokanana ny « Centre de Radiothérapie au Cobalt » ho an’ny CHUJRA
Vahaolana ho an’ireo marary rehetra mitondra ny aretin’ny Homamiadana ny ivon-toeranana vaovao vao notokanana etsy amin’ny befelatanana izay an’ny Hopitaly HJRA, natao indrindra handray an-tanana ireo mararin’ny homamiadana eto amintsika. Zava-dehibe izany, hoy ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina, ary mifandrimbona amin’ny fanatanterahana ny Velirano fahadimy, mahakasika ny Fasahalamana ho an’ny rehetra, amin’ny fotoana rehetra.
Lucien R. 27 février 2021
Manodidina ny 1 300 ireo olona fantatra fa nararin’ny homamiadana tany amin’ny taona 2012-2013. Mitombo io antontanisa io ankehitriny, izay manodidina ny 1 600 eo ho eo. Ny 25% amin’izany dia saika olona voan’ny homamiadan’ny Nono avokoa. Ny 22% kosa ny homamiadan’ny vozon’ny tranonjaza, araka ny fanazavan’ny Minisiteran’ny Fahasalamambahoaka. Nilaza ny Minisitry ny Fahasalamana, ny Profesora Rakotovao Hanitrala Jean Louis, fa mbola betsaka no tsy hita amin’ireo voan’ny homamiadana eto Madagasikara. Hanampy betsaka ny fitsaboana ny homamiadana, araka izany, ity fitaovana vokatry ny fiarahamiasa amin’i Inde ity. Ny homamiadana izay misy fomba maro fitsaboana azy, arakaraka ny fisehoany sy ny faritra misy azy, hoy ny Minisitra. “Ity dia Radiothérapie au cobalt ity na fitaovana hitsaboana ny homamiadana amin’ny alalan’ny Cobalt dia mahakasika homamiadana betsaka, toy ny Nono, vozon’ny tranonjaza”, hoy ny fanazavany. Marihana fa ny saran’ny fitsaboana dia mora. Olona 25 ka hatramin’ny 50 isanandro kosa no ho afaka raisina ao an-toerana. Izany hoe, tafiakatra 1000 isam-bolana no hotsaboina eo. Tsy hisy ny fitohanana fa hohalamina ireo marary, hoy hatrany ny Minisitra.
Matotra ny fiarahamiasa eo amin’ny Inde sy Madagasikara
Tetsy ankilany, nandritra ny fandraisam-pitenenany, nilaza ny Masoivohon’i Inde miasa sy monina eto amintsika fa hanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny Madagasikara sy Inde izao fiarahamiasa izao, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamana. “Fitaovana nahomby indrindra hitsaboana ny homamiadana tany Inde izy io”, hoy izy. Ity farany izay nampahatsiahy fa tamin’ny fandalovan’ny Filoham-pirenena Indianina teto Madagasikara ny volana martsa 2018, dia nampanantena izy fa hanolotra fitaovana ho an’I Madagasikara hahafahana miady amin’ny homamiadana, ary izao tanteraka izao. Nolazainy , araka izany, fa i Madagasikara dia anisan’ireo firenena vitsy nahazo ity fitaovana ity. “Izany dia maneho ny fiarahamiasa matotra misy eo amin’ny firenena roa tonta”, hoy hatrany izy. Nomarihiny fa manome lanja ny fifandraisana eo amin’ny firenena roa tonta ny fanotronan’ny Filoha.
45 000 Ariary ny saran’ny Fitsaboana
Nanome voninahitra ny fotoana omaly ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina. Nambarany nandritra ny fandraisam-pitenenany fa fitaovana hanavotra ain’olona maro ity notokonana ity. “Betsaka ny olona voan’ny homamiadana tsy afaka mitsabo tena satria tsy maintsy mankany ivelany, ary nindaosin’ny fahafatesana. Hanafaka ny fahasahiranan’ireo marary araka izao fotodrafitrasa izao. Iza no hilaza fa tsy laharam-pahamehana izao asa vita izao ?” hoy ny tenany. Na izany aza anefa, nambarany fa tsy ho maimaim-poana ny fitsaboana ao an-toerana satria mila fikojakojana ny fitaovana, ary koa, misy olona miasa. “Natao ho zakan’ny daholobe kosa anefa ny sarany. Raha toa ka 400 000ariary ny saran’ny fitsaboana any amin’ny hopitaly tsy miankina, dia 45 000ariary kosa ho an’ny ao amin’ity hopitaly vaovao ity. Omaly, Natolotry ny Filoha Andry Rajoelina ho an’ny Centre d’Imagerie Médical ao Befelatanana ihany koa ny “scanner numérique à 64 barrettes” izay anisan’ny hika farany amin’ny fitaovana fitarafana ireo aretina ao amin’ny vatan’ny olombelona.
Notsiahivin’ny Filoha fa tafiditra ao anatin’ireo laharam-pahamehan’ny Fitondrana ankehitriny ny sehatry ny Fahasalamana. Efa niisa 111 ireo CSB II naorina sy natsangana tao anatin’ny roa taona, hoy izy. Ankoatra izay, hopitaly manarapenitra 13 no andalam-pahavitana ankehitriny, isan’izany ny any Maintirano, Ihosy, Ambohimahasoa, Belo, Androy, Antsalova. “Misy miezaka tsy mahita ny ezaka atao. Na izany aza, tsy misy afaka manakana ny fampandrosoana”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina.
TSAHO NINIANA NAELY : Tsy mbola nanafatra Vaksiny momba ny Covid-19 ny « Polyclinique d’Ilafy »
Hetsika « Caravane du Sud » : Tokantrano 1400 ianjadian’ny kere nisitraka tohana ara-tsakafo
ANTANANARIVO RENIVOHITRA : Notolorana mari-pankasitrahana ireo ankizy mendrika tamin’ny CEPE
VELIRANON’NY FILOHA : Tafapetraka ny CSAO sy ny BRS ametrahana fandriampahalemana